Ilhan Cumar oo sheegtay in ay wajahayso halis weyn oo nafteeda ah | Xaysimo
Home War Ilhan Cumar oo sheegtay in ay wajahayso halis weyn oo nafteeda ah
Ilhan Cumar oo sheegtay in ay wajahayso halis weyn oo nafteeda ah
Xildhibaanada Aqalka Congresska Maraykanka Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in ay wajahayso halis weyn oo nafteeda ah, kadib markii sida ay sheegtay ay heshay farriimo cod ah oo hanjabaad ah.
Shir jaraaid ayay ka daartay codka loo duubay, kaas oo ay warbaahinta laga sii baahiyay.
Iyada oo marti ku ahayd barnaamijka Peacon ee taleefishinka MSNB ee Mahdi Xassan uu daadiyo ayay sheegtay in aysan xitaa aqoonin sida uu hadda xaalkeeda yahay.
Farriinta loo duubay waxaa ku jiray erayo hanjabaad ah oo lagu eedeynayo in ay tahay Jihaad doon, lagana taqalusi doono.
“Markii ugu horeysay ee xisbiga dhexdiisa la ii xushay in aan ku tartamo kursigan, maalin kadib waxaa isoo gaartay farriintii ugu horeysay oo hanjabaad dil ah “ayay tiri Ilhaan oo muujisay in hanjabaadaha ay muddo soo jiitameen.
Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa dhowaan soo cusboonaysiiyay weerarada afka ah ee uu ku qaadayo Ilhaan, wuxuuna markan ku eedeeyay Ilhaan in ay dayacday dalkeedii Soomaaliya.
Waxa ay sheegtay in inkasta oo siyaasiyiin kale ay helaan hanjabaado, haddane kuwa iyada loo jeediyo ay sababta tahay diinteeda iyo isirkeeda, waxayna intaas ku dartay in dhamaan hanjabaadaha ay ku jiraan fikrado uu horey uga faafiyay Trump.
Ilhaan waxa ay qabtaa in xitaa haddii iyada aanan wax la yeelin, ay waxyeelo gaari karto qof kasta oo iyada u eg.
Dhanka kale Ilhaan waxa ay ka hadashay haweenay xildhibaan ah oo Aqalka ay iskula jiraan oo Ilhaan ku tilmaamtay argagixiso. Ilhaan waxa ay ku baaqdey in laga qaado talaabo ku habboon, sidoo kalena lasoo saaro sharciyo hakamaynaya hadalada caynkaas ah.